Ireo fihaonambe sy ny hetsika - The Reward Reward
Ny Reward Foundation dia manampy amin'ny fampahafantarana ny fivoaran'ny fikarohana lehibe amin'ny firaisana ara-nofo sy ny fitiavana ary ny olana ateraky ny pôrnôgrafia amin'ny Internet. Ataontsika izany amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara amin'ny kaonferansa sy hetsika, amin'ny fampianarana sy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fakan-kevitra ataon'ny governemanta sy ny indostria. Ity pejy ity dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao momba ny toerana ahafahanao mahita sy maheno ny The Reward Foundation.
Ireto ny sasany amin'ny anjara birikinay…
TRF amin'ny 2018
7 March 2018. Mary Sharpe dia nanolotra Ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto eo amin'ny atidoha ao amin'ny sela Gray sy sela any am-ponja: Fihaonana amin'ny filàna neurodevelopmental sy kognitika an'ny tanora marefo. Ny ivon-toerana dia novokarin'ny Center for Youth and Community Justice ao amin'ny University of Strathclyde any Glasgow.
5 sy 6 Aprily 2018. Tamin'ny fihaonamben'ny Global End Exploitation Sexual 2018 tany Virginia, Etazonia, dia nanome fanavaozana i Darryl Mead momba Ny olan'ny pôrnôgrafia any UK ary i Mary Sharpe no nitarika ny Fivorian'ny hetsi-bahoaka momba ny fahasalamana sy ny fikarohana ho an'ny daholobe izay nanatrika mihoatra ny solontenan'ny 80 avy manerana izao tontolo izao.
24 Aprily 2018. TRF dia nanatitra taratasy niarahana tamin'ny Mifampiresaka amin'ny Siansa momba ny fiankinan-doha amin'ny olon-dehibe tamin'ny fivoriambe iraisam-pirenena 5th momba ny fihinan'ny fitondran-tena ao Cologne, Alemana.
7 June 2018. Nanolotra lahateny ampahibemaso i Mary Sharpe Internet pôrnôgrafia sy ny atidoha ao amin'ny Lucy Cavendish College ao amin'ny University of Cambridge.
3 Jolay 2018. Mary Sharpe dia nanao famelabelarana tamin'ny pôrnôgrafia nandritra ny fihaonambe tany Londres Famotehana ny herisetra ara-piraisana ara-nofo sy ny fanorisorenana eo anelanelan'ny ankizy ao an-tsekoly: Famolavolana valim-pifandraisana mangarahara.
5 Oktobra 2018. TRF dia hanolotra ao amin'ny Society for the Advancement of Sexual Health Conference in Virginia Beach, Etazonia. Ny taratasinay dia "Manamora ny fampandrosoana ara-pahasalamana ara-pahasalamana amin'ny zatovo".
TRF amin'ny 2017
20 hatramin'ny 22 Febroary 2017. Mary Sharpe sy Darryl Mead dia nanatrika ny Fihaonambe Iraisam-pirenena 4th momba ny fitsabahan'ny fitondran-tena ao Haifa any Israely. Ny tatitra ataonay momba ireo taratasy ao anatin'ity fihaonambe ity dia navoaka tao amin'ny gazety Sexual Aggression and Compulsivity.
2 Martsa 2017. Ny mpikambana ao amin'ny TRF ao amin'ny boriborintany Anne Darling dia nanolotra seza telo momba ny TRF tao amin'ny programa Perth Theatre, nahitana mpanaraka ny olona 650.
19 Septambra 2017. Mary Sharpe dia nanolotra lahateny natao tamin'ireo mpianatra ambony sy ray aman-dreny nantsoina Nahoana no mijery ny pôrnôn'ny Internet? ho an'ny Fetin'ny Hevitra ao amin'ny George Watson's College any Edinburgh.
7 Oktobra 2017. Mary Sharpe sy Darryl Mead dia nanolotra Pôrnôgrafia amin'ny Internet; Ny zavatra tokony ho fantatry ny ray aman-dreny, mpampianatra ary matihanina momba ny fahasalamana ao amin'ny Andro iraisam-pirenena ny Fikambanana ho fampivoarana ny fihaonambe ara-pahasalamana ara-pahasalamana ao Salt Lake City, Etazonia.
13 Oktobra 2017. Mary Sharpe sy Darryl Mead dia nanolotra Ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana ho an'ny tanora ho an'ny fikambanana Medico-chirurgie Edinburgh.
21 Oktobra 2017. Ny Reward Foundation dia nanolotra lahateny roa sy atrikasa momba ny pôrnôgrafia amin'ny Internet tamin'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena Fahatelo momba ny Fianakaviana ao Zagreb, Kroasia.
16 Novambra 2017. TRF nitarika seminera hariva tao Edinburgh Mandresy ny Porn. Ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ao amin'ny atidoha.
TRF amin'ny 2016
18 sy 19 Aprily 2016. Mary Sharpe sy Darryl Mead nanolotra ny atrikasa “Fanatonana akaiky ny pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny vokany” ao amin'ny Fikambanana Nasionaly momba ny fitondran-draharahan'ny fanararaotana (NOTA) Scotland ao Stirling.
28 Aprily 2016. Mary Sharpe sy Darryl Mead dia nanolotra taratasy "Pôrnôgrafia amin'ny aterineto sy ny atidoha adolescent" tao amin'ny Fihaonamben'ny InternetPROTECT tany Londres “An-tserasera fotsiny izany, sa tsy izany?”: Ny tanora sy ny Internet - hatramin'ny fitrandrahana ara-nofo ka hatramin'ny fitondran-tena mahamenatra. . Ny hafatry ny horonantsary nataon'i Mary Sharpe avy tany amin'ny Fihaonambe dia Eto.
4 May 2016. Nanolotra taratasy roa izahay tao amin'ny Kongresin'ny Teknolojia fahatelo iraisam-pirenena, any Istanbul, Torkia. Niresaka momba an'i Mary Sharpe “Paikady hisorohana ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôn'ny Internet” ary Darryl Mead niresaka momba izany “Ny loza atrehan'ny tanora amin'ny maha mpanjifa sary vetaveta”. Ny kinova iray an'ny kabarin'i Darryl dia navoaka tao amin'ny diary fandinihan-tantara Addicta, azo alaina Eto.
17-19 Jona 2016. Mary Sharpe sy Darryl Mead dia nanolotra taratasy mitondra ny lohateny “Ahoana ny fanovana ireo mpijery sary vetaveta amin'ny Internet ho mpanjifa tsy manam-pahalalana” tao amin'ny Konferansa DGSS momba ny Fikarohana ara-nofo ara-nofo ara-tsiansa ara-tsosialy, "Firaisana ara-nofo toy ny entam-barotra" any Munich, Alemana.
7 Septambra 2016. Nandefa taratasy i Mary Sharpe sy Darryl Mead “Mampiasa orinasa sosialy hampiharihary sary vetaveta amin'ny Internet ho olan'ny fahasalamam-bahoaka” ao amin'ny Konferansa Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena momba ny Fivoarana ara-tsosialy (ISIRC 2016) ao Glasgow. Misy tantara vaovao momba ity fihaonambe ity Eto. Hita amin'ny tranokalan'ny ISIRC ny famelabelarantsika.
23 Septambra 2016. Mary Sharpe sy Darryl Mead dia nanolotra atrik'asa iray “Ny voka-dratsin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet” ao amin'ny Society for the Advancement of Conference on Sexual Health in Austin, Texas. Nisy tantara vaovao momba izany Eto. Misy horonam-peo fanoratana ny fampisehoana azo alaina avy amin'ny Tranonkala SASH ho valin'ny US $ 10.00. Ity ny 34 isa amin'ny taratasy fangatahana.
29 Septambra 2016. Nandefa taratasy i Mary Sharpe sy Darryl Mead "Pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny herisetra ara-piraisana eo amin'ny tanora: fanadihadihana ny fikarohana iraisam-pirenena" tamin'ny fihaonambe iraisam-pirenena NOTA tao Brighton. jereo Nota ho an'ny antsipirian'ny fihaonambe. Ny tatitra ataonay momba ny fihaonambe dia Eto.
25 Oktobra 2016. Mary Sharpe nanolotra “Vetaveta amin'ny Internet sy ny ati-dohan'ny tanora” ao amin'ny fiarovana an-tserasera ho an'ny ankizy sy ny tanora ao Edinburgh napetraky ny Holyrood Events. Click Eto ho an'ny tatitra ataontsika.
29 Novambra 2016. Niresaka i Mary Sharpe sy Darryl Mead “Fanorisorenana ara-nofo sy herisetra ara-nofo any an-tsekoly”, hetsika napetraka tao Edinburgh nataon'i Policy Hub Scotland. Ny tatitray momba ny hetsika dia Eto.